नेपाल आज | एक हातमा बन्दुक र अर्को हातमा कलम बोक्ने एक सैनिक अधिकृतको कथा
कला साहित्य मेरो परिवार मेरो कथा सफलताको कथा समाचार
भनिन्छ खाने मुखलाइृ जुँगाले छेक्दैन यस्तै यउटा उदाहरणीय पात्र बनेका छन् नेपाली सेनाका कर्णेल डा. आसबहादुर तामाङ । नेपाली सेनाका कर्नेल आसबहादुरको ‘जीवनको राज’ यही एउटा शब्दमा सीमित छ । मिहिनेतले गाइड गरिरहेको उनको जीवनको आदर्श हो, ‘सादा जीवन, उच्च विचार ।’ यही मन्त्रलाई आफ्नो गुरुमन्त्र मानेकैले हुनुपर्छ, नेपाली सेनाको कर्नेल पदका आसबहादुर काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमै पनि भेटिन्छन् ।
यस्तो किन पनि भने उनले आफ्ना लागि एउटा साइकलसम्म जोडेका छैनन् । केही जोडेका छन् भने त्यो हो साहित्य, कलाप्रतिको लगाब । हो, आसबहादुरसँग सेनाको जागिर भए पनि कोमल मन लिएर कहिले कविता कोरिबस्छन् त कहिले गीत । सायद जीवनमा सिर्जनशील हुन भावुक हुनुपर्छ, सेनाको ‘कडा परेड’त्यसका लागि बाधक हुन सक्छ । तर, आसबहादुरको जीवनको परेड कम्ती भावुक छैन । लमजुङको परेवा डाँडामा ०२४ सालमा जन्मेका आसबहादुर ०४१ सालमा भविष्य ‘उज्ज्वल’ पार्ने सपना बोकेर काठमाडौं आउँदा जीवनले कुन गोरेटो समात्ने हो निश्चित थिएन । सपनाहरूले घेरिएर काठमाडौंको माटोमा टेक्दा आसबहादुरसँग दुई कुरा थिए, एउटा आशा र अर्को आमाले गोरु बेचेर पठाएको पैसा । ‘ती दिनमा एक मुठो सागले दुई छाक पुग्थ्यो,’ आसबहादुर विगतमा पुग्छन, ‘म पढ्न आएको थिएँ, मेरो ध्यान भने पढाइमै थियो । ल क्याम्पसमा भर्ना भएपछि म निरन्तर पढिरहेँ, पढाइमै मिहिनेत गरिरहेँ ।’
एउटा सानो कोठामा आसबहादुरले नयाँ क्यालेन्डर झुन्ड्याएर अध्ययन सुरु गरेका थिए, तर त्यही क्यालेन्डरले उनलाई विगतमा फर्काइदिन्थ्यो । कोठाको क्यालेन्डरका पाना पल्टँदै गए, तर आसबहादुरले विगतलाई बिर्सिएनन् । ‘बाबुआमाको धेरै छोरीपछिको छोरो हुँ म,’ उनी सम्झन्छन्, ‘बुबा (चन्द्रबहादुर तामाङ)ले ठूलो आशासहित मेरो नाम नै आसबहादुर राखिदिनुभयो ।’ त्यसो त त्यतिवेला चन्द्रबहादुरको ठूलो सम्पत्ति थिए, आसबहादुर । ‘म सानो छँदा बुबाले मेरो पुख्र्यौली सम्पत्ति यही हो बाबुु भन्दै एउटा कचौरा देखाउनुहुन्थ्यो । आमाले अरूको गोठालो बसेर मलाई पढाउनुभयो । त्यसैले मेरा भगवान् नै बुबाआमा हुनुहुन्छ,’ उनी अहिले पनि भावुक बन्छन् । सायद भौतिक सम्पत्तिले जीवनमा ठूलो अर्थ राख्दैन । तर, यसको अर्थ के होइन भने जीवनमा भौतिक सम्पत्तिको कुनै अर्थ नै हुँदैन । आसबहादुरका बुबासँग सम्पत्तिको नाममा एउटा कचौरा भए पनि अरू केही कुरासँग तुलना गर्न नमिल्ने ‘स्वर’ सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति थियो । ‘बुबाले अत्यन्त राम्रो गाउनुहुन्थ्यो,’ आसबहादुर सम्झन्छन, ‘लमजुङमा मात्र होइन, बुबाको ख्याति वरपरका जिल्ला गोरखा, तनहुँमा पनि थियो ।
कतिसम्म भने लोकभजन गाउने भएकाले मेरो बुबा पक्का भएपछि मात्र पूजाआजा निश्चित गरिन्थ्यो, पण्डितलाई बोलाइन्थ्यो । आमाको स्वर पनि त्यस्तै राम्रो थियो ।’ सायद, आसबहादुरमा गीत–कविताप्रतिको माया र सिर्जनशीलता बुबाआमाको ‘जिन’बाट नै आएको हो । त्यही जिनमा आसबहादुरमा अर्को गुण पनि स¥यो– मिहिनेत । भनिन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात । यो भनाइ आसबहादुरको जीवनमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । नमिल्थ्यो त सानैमा एक घन्टाको बाटो हिँडेर आसबहादुर नबिराई स्कुल जाने थिएनन् । ‘बिहान घरमा काम गर्नुपथ्र्यो, अनि स्कुल पुग्न एक घन्टा लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन, ‘कहिलेकाहीँ खाना खान ढिलो हुन्थ्यो । म बरु भोकै स्कुल जान्थेँ, तर सधैँ समयमा नै स्कुल पुग्थेँ । बरु, बुबाले टिफिनमा खाना ल्याइदिनुहुन्थ्यो, म हाफ टाइममा त्यो खाना खान्थेँ ।’ पढाइमा राम्रो गर्दै गएका आसबहादुरले कविता पनि लेख्न थाले, स्कुले कार्यक्रमहरूमा सुनाउन थाले ।
भानुजयन्ती, देवकोटाजयन्तीमा उनी मञ्चमा उभिएर कविता सुनाउन थाले । ‘कतिपटक पुरस्कृत पनि भएँ,’ उनी भन्छन, ‘नौ कक्षा पढ्दा कोरेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्केच अहिले पनि स्कुलमा टाँसेर राखिएको रहेछ ।’ जीवनलाई यस्तै उत्साह र पुरस्कारले अगाडि बढाउँदै लग्यो । तर, जीवन सधैँ उत्साहै उत्साहको मेल कहाँ हो र ? घटित केही सन्दर्भले मानिसको जीवन यात्रामा टर्निङ ल्याइदिन्छन् । आसबहादुरको जीवनमा पनि यस्तै एउटा दुःखद घटना भयो । यसले अहिले पनि उनलाई झस्काइरहन्छ । उनी झस्किन्छन, ‘म त्यस्तै सात–आठ वर्षको थिएँ, घरनजिकैको लाहुरकाटे दहमा पौडी खेल्न गएको थिएँ ।’ गहिरो दहमा ‘केटाकेटी’ आसबहादुर पौडन थालिहाले । तर, उनी दहमा तैरिन सकेनन् ।
उनी सम्झिन्छन, ‘मसँग एकजना दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो । पौडँदै थिएँ, खुट्टा गाडिएजस्तो भयो । दाइ भागिहाल्नुभएछ, म बालुवामा गाडिएछु ।’ यो सम्झनाले पनि आसबहादुरलाई निराश बनाइदिन्छ । उनी लामो सास लिन्छन् र भन्छन, ‘त्यही वेला भारतीय लाहुरे गोपीचन्द्र अधिकारी माछा मार्न आउनुभएको रहेछ । उहाँले माछाका लागि दहमा नाउगुडी हाल्नुभएछ । मैले त्यसलाई समाएछु । उहाँ तर्सिनुभएछ र त्यसलाई तान्नुभएछ ।’ गुमिसकेको जीवन फिर्ता पाए आसबहादुरले । र, बुबाआमाको आशा झन् बढ्यो । ‘बुबाआमा भन्नुहुन्थ्यो– तँलाई केही भएको भए हाम्रो हाल के हुँदो हो ?’ बुबाआमाको यही कुराले पनि जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढायो, आसबहादुरलाई ।
उनी झन् मिहिनेत गरेर पढ्न थाले । मिहिनेतको फल सधैँ मीठो हुन्छ, यही भयो उनको जीवनमा पनि । उनले फस्र्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गरे । तर, एसएलसीको रिजल्ट आउँदा उनी उत्साहमा थिएनन् । मानौँ, आसबहादुरको जीवन कुनै फिल्मी स्क्रिप्ट हो, दुःखले उनलाई छोडेको थिएन । एसएलसीको रिजल्ट आउँदा त उनलाई साथ दिइरहेका बुबाले पनि छोडिसकेका थिए । ‘बुबाको निधन भएको चार दिनपछि एसएलसीको रिजल्ट भएको थियो,’ त्यतिवेला जिल्लाभरबाट फस्र्ट डिभिजन ल्याएका तीनमध्ये एक थिए आसबहादुर, तर उनमा कुनै उत्साह थिएन, ‘मैले त्यो खुसी बुबालाई सुनाउन पाइनँ । बरु, मनमा आएका भावना शब्दमा पोखिरहेँ ।’ र, यही सफलताले बुबाको सपनालाई झन् कडा बनाएर मनमा खोपे आसबहादुरले । त्यही सपना लिएर उनी ०४१ सालमा उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आए । ‘कुपण्डोलको एउटा चिरिएको घरमा डेरा पाएँ । त्यो एउटा कोठामा हामी तीनजना बस्थ्यौँ ।
उनी सम्झिन्छन, ‘मासिक ७५ रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । एक सुकामा एक मुठो साग आउँथ्यो । त्यसैमा पानी हालेर बिहान–बेलुका खान्थ्यौँ ।’ तर, आमाले हलगोरु बेचेर पठाएको पैसा सकिएपछि आसबहादुरको जीवनबाट आसै हरायो । ‘छाक टार्न नै धौधौ हुन थाल्यो,’ उनी सम्झिन्छन, ‘अनि जागिर खोज्नुको विकल्प बाँकी रहेन ।’ त्यही जागिरको बाध्यताले उनी लोकसेवा दिने तयारीमा जुटे । पास पनि गरे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण शाखामा एउटा मात्र कोटा रहेछ । त्यो पनि धादिङमा । तर, उनीसँग त्यहाँ जानैपर्ने बाध्यता थियो । अनि धादिङ पुगे, यता क्याम्पस उनका लागि नौलो हुन थाल्यो । तैपनि, उनले आइएलको परीक्षा दिए । त्यसमा सफलता पाए ।
त्यसपछि आसबहादुरको जीवनमा झनझन् धेरै आशा पलाउँदै गए । धादिङमा एक वर्ष बिताएर सहलेखापालमा परीक्षा दिए । त्यहाँ पनि नाम निकाले । त्यसपछि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय बबरमहलमा जागिर गर्न थाले । उनी सम्झन्छन, ‘त्यतिवेला सात सय रुपैयाँ तलब थियो ।’ तर, यतिमै आसबहादुर सन्तुष्ट थिएनन् । उनी जीवनमा थप मिहिनेत गर्न चाहन्थे । त्यसैले, उनी सेनामा हान्निए । ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा माग भएको थियो, मैले तयारी गरेँ र पहिलोपटकमै नाम निकालेँ,’ उनी भन्छन, ‘गाउँको उकाली–ओराली गरेकैले हुनुपर्छ, मलाई समस्या भएन ।’ यो २७ वर्षअघिको सम्झना हो । तर, सेनाका जागिरे भए पनि आसबहादुरले न त सिर्जनशीलतालाई मर्न नै दिए, न पढाइलाई बीचबाटोमै छोडे । ‘चौबिसै घन्टा ड्युटी हुँदा पनि मैले रमाइलो र निद्रालाई कटाएर अध्ययनलाई अगाडि बढाएँ,’ उनी भन्छन् । त्यसैले त आसबहादुर अहिले गर्वसाथ भन्न पाउँछन मैले पोलिटिकल साइन्समा डिग्री र विद्यावारिधि गरेको छु । योसँगै उनले सिर्जनशीलतालाई पनि अगाडि बढाइरहे । सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिरहे । विभिन्न देशमा पुगेर पनि नेपाली संस्कृतिका विविध पाटा देखाइरहे । कतै निर्देशन गरेर नृत्य प्रस्तुत गरे त कतै कविता वाचन गरे ।
चित्रकारितामा पनि मन भएका आसबहादुरले ०५५ सालमा सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा सोलो आर्ट एक्जिबेसन पनि गरे । उनी भन्छन्न ‘म वाटर, ओयल कलर, चारकोल, पेन्सिल कलर सबै चलाउँछु ।’ तर, आसबहादुरको सिर्जनशीलता यतिमै सीमित हुँदैन । उनका नाममा एल्बम पनि बजारमा आइसकेको छ । ०५८ सालको ‘धन’ एल्बममा उनकै आमा धनमायाले स्वर दिएकी छिन् । ‘आमा मरेर गए पनि स्वर बाँचिरहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो,’ उनी भन्छन् । यही एल्बम पछि पुरस्कृत पनि भयो । यसले आसबहादुरलाई थप ऊर्जा दियो । अहिले त उनका गीत चलेका गायकले पनि गाएका छन् । रामकृष्ण ढकालले उनको गीतमा स्वर दिएका छन् । आखिर यो सब सम्भव भएको उनको सिर्जनशीलतामा निरन्तरताले नै हो । उनी भन्छन, ‘सिर्जना कहिल्यै मर्दैन । र, मार्नुहुँदैन ।’ यसको उदाहरण त आसबहादुर नै हुन, जो एउटा हातमा बन्दुक बोकिरहेका छन, देशको सुरक्षार्थ र अर्को हातमा कलम लिएर लेखिरहेका छन् यही माटोका भावना ।
आसबहादुर आफैँले पनि गीत गाएका छन् । जीवनमा अनेक उकाली–ओराली गरेका आसबहादुरलाई जीवनमा आशावादी भएर बाँच्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्छन् । कर्तव्यनिष्ठ, बफादारी र जिम्मेवार भएर अगाडि बढे जीवनमा सफलता पाउने उनलाई उनकै जीवनले पनि सिकाएको छ । तैपनि, जीवन सफलताको सूत्रलाई उनी आफ्नै शैलीमा भन्छन, ‘मिहिनेत, मिहिनेत, मिहिनेत ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
Dr. Aash Bahadur Tamang Nepal Army
अन्तरजातीय विवाहपछि कमाण्डरले भने -‘यिनीहरुको त जन्ती होइन, मलामी जानुपर्ने'